Handrara ny sidina Tiorka, Lufthansa, Austrian, Qatar Airways, Aeroflot ary Ukraine International Airlines ve i Canada?
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Handrara ny sidina Tiorka, Lufthansa, Austrian, Qatar Airways, Aeroflot ary Ukraine International Airlines ve i Canada?
Praiminisitra Kanadiana Justin Trudeau nilaza ny sabotsy fa ny fifantohan'ny governemantany dia ny fandraisana andraikitra sy ny fahamarinana ho an'ireo niharan'ilay fiaramanidina Okrainiana izay nolazain'i Iran fa tsy nahy izany. Midika ve izany fa handà i Kanada Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian, Qatar, Aeroflot, ary Ukraine International Airlines avy amin'ny fandosiranana be loatra sy ny fipetrahana any Canada?
Tokony havela hiasa amin'ny seranam-piaramanidina i Malezia? TNy fanontaniany dia napetraky ny Flyers Right tamin'ny 2014 taorian'ny nanamoriana ny sidina Okrainiana Okraina, faritra ady ny Malaysian Airlines. Ny MH 370 dia voatifitra tsy nahy ary maty daholo ny mpandeha tao anatiny. Na izany aza, ny Malaysia Airlines dia nahalala ary nijanona tsy ho afaka amin'ny habakabaka iraniana.
Ankehitriny dia tokony ho nahalala bebe kokoa ny kaompaniam-pirenen'i Okraina. Miaraka amin'ny toe-tsaina tsy misy ahiahy, nanapa-kevitra tamim-pahatokisana ny fiaramanidina Okrainiana hisidina mihoatra ny faritra misy ny ady, antsoina hoe Iran ka nahafaty mpandeha sy ekipa 176.
Efatra andro taty aoriana dia tsy nisy ny fialantsiny ho an'ireo niharam-boina maro nataon'ny fitantanana ny Ukraine Internati0onal Airlines, fa ny fitakiana ny fandoavam-bola avy any Iran, inona mazava ho azy fa fangatahana mirindra sy lojika. omaly eTurboNews soso-kevitra Meluf koa ny vondrona Lufthansa tamin'ny famonoana mpandeha 176 ary nametraka mpanjifa an-jatony ho tandindomin-doza.
Tsy mbola nisy ihany koa ny fialantsiny nataon'ny Turkish Airlines, avy amin'i Lufthansa, avy amin'ny Austrian Airlines, Aeroflot ary Qatar Airways noho ny tsy nitarihan'izy ireo ohatra tamin'io andro mahatsiravina io. Azo inoana fa tsy nisy tamin'ireto orinasam-pitaterana an'habakabaka ireto nanaiky hoe nanao zavatra tsy nety izy ireo tamin'ny nanohizany nanidina nankany Iran nandritra ny fotoana nahitana ny habakabaka tsy natahoran'ny FAA ary nifandrafy ny fifandrafiana teo amin'i Iran sy Etazonia.
Farafaharatsiny nitsangana i Iran tamin'ny farany ary niaiky fa meloka. Ity fizarana heloka ity dia mila zarain'ny antoko rehetra voarohirohy.
Iza no tokony hanonitra ny fianakavian'ireo mpandeha 176 izay tsy voatery maty tamin'ny Alarobia? Mazava ho azy, ny praiminisitra kanadianina Justin Trudeau sy ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky dia marina tanteraka amin'ny fitakiana ny fahamarinana avy amin'ny Governemantan'ny Repoblika Islamika Iran.
Fa angaha Atoa Trudeau koa tsy mangataka onitra avy amin'ny Okraina International Airlines, Turkish Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Aeroflot ary Qatar Airways?
Tsy hanana antony marim-pototra ve i Kanada hanasazy ireo mpitatitra toy izany raha tsy mihetsika izy ireo? Kanada dia mety manana antony marobe handrarana ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka toy izany tsy hisidina mihoatra ny fireneny ary hametraka ny zon'izy ireo hipetraka mandra-pandoavana ny tambin-karama sy ny fanoloran-tena natao, ka tsy azo averina intsony ny trangan-javatra toy izany.
Ny PM Kanadiana dia manana izany amin'ny olony 68 sy ny fianakaviany ao anaty sidina nianjera. Izy koa dia manana andraikitra amin'ny Kanadiana rehetra, noho izany dia tsy hisy olona iharan'ny fahavoazana amin'ny sidina toy izany na oviana na oviana avy any Canada, raha tsy hoe manao fanekena hanaja ny FAA sy ireo fampitandremana mitovy amin'izany ireo mpitatitra toy izany.
Ny zava-misy fa ny zotram-piaramanidina ara-barotra dia manidina amin'ny faritra misy ny fifanolanana ary ny codesharing dia midika fa ny mpandeha dia mety tsy hahafantatra ny zotram-piaramanidina idirany rehefa mamandrika sidina iray izy ireo dia manokatra indostrian'ny seranam-piaramanidina ho adidy izay mety sarotra takarina. Betsaka ny olona manontany hoe: Inona no nataon'ilay fiaramanidina manidina ambonin'ny faritra misy ady?
Fiaramanidina telonjato no nokasaina hisidina hamaky an'i Okraina tamin'ny andro nitifirana ny MH370, na teo aza ny fampitandremana ireo kaompaniam-pitaterana momba ny 'loza mety hitranga amin'ny fiarovana'.
Any Iran, fampitandremana mitovy amin'izany no nomen'ny Federal Aviation Authority any Etazonia ary tsy noraharahian'ny orinasa fiaramanidina marobe.
Tamin'ny taona 2014, KLM dia nilaza tamin'ny fanambarana iray fa “misoroka ny sidina mihoatra ny faritany voakasik'izany”. Nanontany ny KLM i FlyersRights raha politika taloha na vaovao ity. Tsy namerina ny antso nataontsika ny kaompaniam-pitaterana.
Mitohy ity tantara ity….
Mitsangatsangana any Jamaika? Ny mpitsidika dia tokony hiomana amin'ny traikefa azo antoka fanampiny
Fikambanana Iraisam-pirenena mandray vahiny no mitondra ny anarana hoe Président New Italia